Phupha ngeRegional Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ibutho liyilo eliphakathi kwinqanaba lomkhosi. Ngokwamanani, ibutho likhona naphakathi kwebrigade kunye nomkhosi, kodwa amandla Kuxhomekeka kuhlobo lwesixhobo, ixesha kunye nelizwe ekuthethwa ngalo. Ibutho lidla ngokuyalelwa yintloko.
Igama "ibutho" likwasetyenziswa kulwimi xa umntu elawula okanye ephethe into ethile. Kuyacaca ukuba ayisiyonto ininzi emkhosini, kodwa kwinqanaba likarhulumente okanye lemihla ngemihla.
Xa kutolikwa iphupha ngophawu "webutho", umahluko kufuneka wenziwe phakathi kwala manqanaba mabini anentsingiselo. Ngapha koko, iimeko ezihamba nazo kufuneka ziqwalaselwe ngokusondeleyo ekutolikeni njengoko zinokubonelela ngolwazi oluthe kratya.
1 Uphawu lwephupha «iButho» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «webutho» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iButho» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iButho» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo ngokubanzi lwephupha lutolika ibutho, elibona ubani ematsha ephupheni, njengophawu lwe IKummer kunye neendleko zemali. Mhlawumbi umphuphi uya kuphazamiseka yinto engathandekiyo.
Ukuba iqela elinjalo okanye icandelo lokwahlula lidlula ephupheni, uya kuzifumana kungekudala el mundo yomlindo. Impikiswano ngaphambili. Ukuze umntu azilungiselele ngaphakathi. Njengeyunithi yemikhosi yempi, ibutho linokubonisa ukwesaba kwamaphupha. Ekuvukeni ubomi woyika ukulahleka kwezoqoqosho okanye komntu.
Ukuba umphuphi ubona inkampani yaseBundeswehr ephupheni lakhe, mhlawumbi nakwizisele, kufanele ukuba yeyakhe ukungabi namandla qaphela kwiimeko ezithile. Kuya kufuneka ndijongane nale nto. Ukubona kwemirhumo kumngcelele, mhlawumbi nasemculweni wokumatsha, kubandakanya isimemo kumntu oleleyo ukuze aziphathe ngakumbi okanye anike ingqalelo ngakumbi. Ukuba amalungu ebutho anxiba iimaski zerhasi ngelixa abaleleyo, banokoyikiswa ngokunyelisa kwihlabathi elivukayo.
Ukuba umfanekiso wephupha "webutho" ubonwa ngengqondo yomgaqo omnye okanye njengophawu lwamandla, umxholo wephupha onjalo ungabonakala kwi Izinzuzo kwaye ubhekise kwimpumelelo. Umphuphi unokukhangela phambili kwinto yokuba ngoku uya kufumana umvuzo wakhe emva kwenqanaba elidinisayo.
Uphawu lwephupha «webutho» - ukutolikwa kwengqondo
Icala lezengqondo lokuchazwa kwephupha libeka iphupha, apho elinye liyinxalenye yebutho, njengesilumkiso kulungelelwano. ukusebenzisana noogxa bakho okanye nabahlobo.
Ukuba ibutho liya emfazweni ephupheni, umphuphi umi kwihlabathi elivukayo. Ukulwa kunye neengxabano ezingaphambili. Nangona kunjalo, lo mfanekiso uphuphayo unokukuqhubela ekubeni uxolelanise kunye nembangi kwaye uthathe inyathelo lokuqala. Nabani na ophupha ngokuba lijoni kwicandelo lerejimeni okwangoku ukwimeko yobomi enesidima kwaye ulangazelela ulungelelwaniso ebomini.
Umbono womphathi onolawulo nolwalathiso okanye onika iiodolo ngokubanzi kubandakanya ukubhekiswa kwimisebenzi noxanduva. Tareas yalowo uleleyo. Akufanele ulibale okanye uphazanyiswe ngabo.
Uphawu lwephupha «iButho» - ukutolika kokomoya
Ukuba uphawu lwephupha "ibutho" libonwa ngengqondo yomthetho ephupheni, emva koko, ngokokuchazwa kwephupha lokomoya, oku kunokuba ngenxa yomnqweno wokugqitha. Ukuzimisela okanye bhekisa kwimpembelelo.